အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရလက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
Posted on December 21, 2018 December 21, 2018 by moezaw
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးလက် အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့အတည်ပြုလိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းသမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေး မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသွားသည်။
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (ထွေ/အုပ်) ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ရုံးအောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည် ။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးအောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဟု သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဦးဇော်ဌေးက ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် အတည်ပြု ပြောကြားသည်….
လက်ရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ခန့်အပ်ရသည်….
အခုလို ပြောင်းရွှေ့တာက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်တာဖြစ်ပြီး၊ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀ဝ၈ ပုဒ်မ ၂၂၇ နဲ့ အညီဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ပိုမိုခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း သူကဆိုပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး အဖြစ် ဦးမင်းသူ ကို မကြာသေးခင်ကာလကပဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ခန့်အပ်ခဲ့တာပါ။
ထွေ/အုပ် ဦးစီးဌာန ပြည်ထဲရေး အောက်ကနေ ရွှေ့မယ် ။ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန အောက် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ဦးဇော်ဌေးက ဒီနေ့ညနေ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေနဲ့ အညီ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စီစဉ်နေပြီး အချိန်ကာလ အားဖြင့် မကြာခင်မှာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနကို အခုလို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက် ပြောင်းရွှေ့တဲ့ အပေါ် ဘီဘီစီ ပရိသတ်တွေရဲ့ သဘောထား အမြင်တွေကို မှတ်ချက်မှာ ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနကို ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန လကျအောကျမှ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးလကျ အောကျသို့ ပွောငျးရှအေ့တညျပွုလိုကျပွီး ဖွဈကွောငျးသမ်မတရုံးပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေး မှသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျပွောသှားသညျ။
အထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာန (ထှေ/အုပျ) ကိုပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ ရုံးအောကျသို့ ပွောငျးရှမေ့ညျ ။ အထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနကို ပွညျထောငျစု အစိုးရအဖှဲ့ ရုံးအောကျသို့ ပွောငျးရှမေ့ညျဟု သမ်မတရုံး ပွောခှငျ့ရသူ ဦးဇျောဌေးက ယနေ့ ဒီဇငျဘာ ၂၁ ရကျနေ့ ညနေ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲတှငျ အတညျပွု ပွောကွားသညျ….
လကျရှိ အထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနသညျ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာန လကျအောကျတှငျ ရှိနခွေငျးဖွဈသညျ။ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒအေရ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးကို တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ခနျ့အပျရသညျ….
အခုလို ပွောငျးရှတေ့ာက နိုငျငံတျောသမ်မတ ရဲ့ အစညျးအဝေးဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ လုပျတာဖွဈပွီး၊ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ၂၀ဝ၈ ပုဒျမ ၂၂၇ နဲ့ အညီဆောငျရှကျတာဖွဈတယျလို့ သူက ရှငျးပွပါတယျ။ အုပျခြုပျရေးယန်တရား ပိုမိုခိုငျမာအောငျ ဆောငျရှကျတာ ဖွဈတယျလို့ လညျး သူကဆိုပါတယျ။ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး အဖွဈ ဦးမငျးသူ ကို မကွာသေးခငျကာလကပဲ နိုငျငံတျောသမ်မတက ခနျ့အပျခဲ့တာပါ။
ထှေ/အုပျ ဦးစီးဌာန ပွညျထဲရေး အောကျကနေ ရှမေ့ယျ ။ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာန လကျအောကျမှာ ရှိတဲ့ အထှထှေေ အုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနကို ပွညျထောငျစု အစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီးဌာန အောကျ ပွောငျးရှဖေို့ စီစဉျနတေယျလို့ သမ်မတရုံး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရ ဦးဇျောဌေးက ဒီနညေ့နေ နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောလိုကျပါတယျ။
အခွခေံဥပဒနေဲ့ အညီ ပွောငျးရှဖေို့ စီစဉျနပွေီး အခြိနျကာလ အားဖွငျ့ မကွာခငျမှာ အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျမယျလို့ ဆိုပါတယျ။အထှထှေေ အုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနကို အခုလို ပွညျထောငျစု အစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီး ဌာန လကျအောကျ ပွောငျးရှတေဲ့ အပျေါ ဘီဘီစီ ပရိသတျတှရေဲ့ သဘောထား အမွငျတှကေို မှတျခကျြမှာ ဆှေးနှေးကွဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ။
အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးကို အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့တရားခံ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေ